Kongiresii Federaalawaa Oromoo (KFO): Filannoon Haqaa fi Hirmaachisaa Hintaane Diimokiraasii Fiduu Hindanda’u – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKongiresii Federaalawaa Oromoo (KFO): Filannoon Haqaa fi Hirmaachisaa Hintaane Diimokiraasii Fiduu Hindanda’u
Kongiresii Federaalawaa Oromoo (KFO): Filannoon Haqaa fi Hirmaachisaa Hintaane Diimokiraasii Fiduu Hindanda’u
Kongiresii Federaalawaa Oromoo (KFO) : Filannoon Haqaa fi Hirmaachisaa Hintaane Diimokiraasii Fiduu Hindanda’u
Haala Siyaasaa Itoophiyaa Ammee Ilaalchisee Ibsa Kongiresii Federaalawaa Oromoo (KFO) Irraa Kenname
Dhaabni keenya Kongiresiin Federaalawaa Oromoo (KFO)n waggoota sadan darban ce’umsi diimokiraasii milkaa’aan biyya keenyatti akka adeemsifamuuf nuffii tokko malee ibsa adda addaa baasaa, hundumayyuu gorsaa ture. Akkasumas filannoon Walii Galtee Biyyaalessaatiin hindeeggaramne biyyattii gaaga’ama siyaasaa keessaa baasuu akka hindandeenye deeddebinee hubachiifneerra. Keessumaayyuu qaamni tayitaarra jiruufi olaantummaa paartii tokkootiin hudhame, gaaffilee mariif ta’u jenne dhiyeessaa turre gara marii fakkeessaa/bu’a-maleessatti jijjiruun isaa, gaaga’ama biyattii gara gaaga’ama biraatti ceesisaa jira. Tiyaatirri siyaasaa tibbanaas bu’aa ejjannoo gogaa kanaati.
Filannoon KFOn keessaa dhiibamee ba’eefi guutummaa uummata Itoophiyaa bakka hinbuune kun, shakkii keenya mirkaneessuurraa kana hafe, iyya komii paartilee filaannoo keechatti hirmaatanii dhaga’uun danda’amaeera. Adeemsi filannichaa walii gala, miira uummataa kan hinhawwanne waan ta’eef, gadi fageenyaan yoo ilaalamemmoo, fedhii paartii taayitaarra jiruu waan hinguutneef galmeen filattootaa yeroo sadii dheerateera. Akkuma Boordiin Filannoo mataansaa amanetti, beekamtii boordichaatiin alatti buufataaleen filannoo 79 hundeeffamanii aragamaniiru.
Naannolee filannoo dhibbootaan lakkaayaman keessatti filannoon tasumaa hindeemsifamne. Naannoolee akka Oromiyaa, aanaalee dhibbootaan lakkaayaman keechatti diraamicha bareechuuf paartiin taayitaarra jiru ofii isaa waliin dorgomeera. Sababa waraanaatiin Tigiraayi keechatti guutummaatti filannoon hinturre. Walii galatti harka 100 keechaa shantamni filannoon ala jechuun ni danda’ama. Oolee bulee adeemsa bu’aa-ba’ii kanaan miidhaa mudatu tilmaamuuf nama paartii ta’uu hinbarbaachisu.
Falmitootni keenyallee osoo hinafiin akkuma nu hubtan, filannoo keechaa dhiibamuun Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)fi Kongiresii Federaalawaa Oromoo (KFO) eenyumaaniyyuu hinfayyadne. Hundaan olimmoo, jiijjiramni waggaa sadiin dura dhiiga dardarran Oromootiin argame, dhaabbileen isaan bal’inaan deeggaran filannoon ala waan ta’aniif, Seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keechatti ‘qabxii hadhaa’aa’ guddaa tokko ta’ee kan jiraatu, afaan ifa ta’eenimmoo ummata keenyaaf ‘gantummaa marsaa lammaaffaa’ nutti fakkata. Filannoon fedhii biyyattii guutuu hindandeenye, jechuun: nagaaf tasgabbii itti fuffiinsa qabuufi Itoophiyaa diimokiraatoftee hunda walqixa keessummeessitu yoo hinhundeessine, raajii kamiinuu misoomaafi badhaadhina kitilootaaf ta’u fiduu hindanda’u.
Kanaafuu, nuti gama keenyaan yaadni fuurmaataa humnootaa siyaasaa biyyattii hundaaf dhiyeessinu:
1. Hatattamaan ‘Mootummaa Waloo’ hunda hirmaachisu akka hundeeffamuufi ‘Haaromsi Dhaabbilee Mootummaa’ hinmilkaa’iin hafe akka iti fufu,
2. Mariin Waliigaltee Biyyaalessaa hunda hirmaachiisaa ta’e hatattamaan akka jalaqabuufi
3. Mootummaan Waloo kun wixinee waloo (Common Road-Map) akka uumuuf haalota mijeessuufi, yeroo waggaa tokkoo keechatti, filannoon bilisaa, haqa-qabeessiifi fudhatamummaa qabu akka gaggeeffamu kanneen jedhanidha.
Xumura irrattis, yeroo murteessa kana keessa lammileen biyya keenya Itoophiyaadhaaf yaada gaariifi ijaaraa qabdan lammileen Itoophiyaa hundumaafi hawwaas addunyaa ijibbata keenya cina dhaabbachuun nageenya waaraafi ce’uumsa dimookiratawaan akka raawwatamu waamicha ulfinaa isiniif gooneerra.
Kongiresii Federaalawaa Oromoo
Finfinnee Waxabajjii, 2013
Oduu Waxabajjii 23,2021- KFOn dhaabbilee Idil-Addunyaaf waamicha dhiyeessu fi Oolma Lola Tigraay
ፍትሓዊና አካታች ያልሆነ ምርጫ ዴሞክራሲን ሊያዋልድ አይችልም!